Rehefa azo ny serveur dia misy toerana web-based tonga dia hidirana ahafahana manao ny installation-n'ny OS sy ny sisa.
Rehefa miditra dia tonga dia omeny choix na hanao ny installation par défaut (Ubuntu) na hifidy Distribution iray amin'ireo 7 izay omeny. Nojereko aloha ny documentations momba izay zavatra efa installés ao amin'ilay ubuntu ka hitako fa tsy dia ratsy. Na dia mbola lazaina fa mbola tsy dia be mpampiasa amin'ny serveur aza ny ubuntu dia nanome toky ihany ny fahitana ny heriny avy amin'ny base Debian
Nofidiako izany ny par defaut izay mampiditra ny ubuntu. Tonga dia mitranga avy eo ny pejy manaraka izay ahitana ny fizotran'ny installation. Eo amin'ny 12 minitra eo ny installation. Rehefa vita dia tonga dia mahazo IP.